Malezia: Mihevitra ny hanafoana fanadinana roa ny Ministeran’ny Fanabeazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2010 6:45 GMT
Ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena Maleziana, Muhyiddin Yassin, dia nilaza tsy ela akory izay ny mety hanafoanana andiam-panadianana roa voarakitra ao anatin'ny rafi-pampianarana amin'izao fotoana: ny C.E.P [avy amin'ny mpandika: toy ny C.E.P.E Malagasy] ( fantatra amin'ny fanafohezana hoe UPSR) sy ny Diplaomam-panabeazana antsoina hoe Lower Certificate of Education (fantatra amin'ny hoe PMR). Heverin'ny Ministeran'ny Fanabeazana fa mirona loatra any amin'ny fanaovana fanadinana ny rafitra fanabeazana misy amin'izao fotoana ka hosoloina rafitra mijery ny fanaovana tomban'ezaka eny anivon'ny sekoly mba ho famporosihana bebe kokoa ny fanabeazana mivelatra.
Anatina lahatsoratra iray navoakan'ny The Star, Muhyiddin, izay sady Praiminisitra no solombavambahoaka ihany koa dia milaza fa:
Ireo fiovana ireo dia tokony hitarika any amin'ny saina tia karokaroka, tia famoronana ary ny fahazotoan'ny mpianatra mirotsaka bebe kokoa amin'ny fanaovana fanatanjatantena sy fandraisana anjara amin'ny fananganan-javatra hafa miditra amin'ny fandaharan'asam-pampianarana ho azy ireo ihany “Ny fiovana dia hanafoana ihany koa ny fahazaran-dratsy amin'ny fibeazana izay nanome laka be loatra ny tsy fanomezan-toerana ny mpianatra hampiasa saina,” hoy izy.
Raha araka ny voalazan'ny Education in Malaysia, ny governemanta dia tokony hijery ny kasinga rehetra mandray anjara amin'ny tsy fahombiazan'ny rafi-panabeazana:
Miombon-kevitra tanteraka amin'ny tokony hanavaozana ny rafi-panabeazana eto amintsika aho mba hisakanana azy tsy ho lasa “famokarana robots”. Na izany aza, ilaintsika fantatra ny anton'ny tsy fahombiazana eo amin'ny rafi-panabeazantsika izay tsy voatery ho ny fisian'ny fanadianana isan'ambaratonga. Voalohany indrindra, raha tsy manova ny fomba fampianarantsika isika mba handrisika ny asa famoronana, sy saina mandalina sy mikaroka, ny fanafoana fanadinana dia na ho kely na tsy hitondra fiovana velively amin'ny hatsaràn'ny fanabeazana ho an'ireo mpianatsika. Ohatra, raha tsy miovana ny fari-pahalalana sy ny fahaiza-manaon'ireo mpampianatra, dia ho zara raha misy ny fiovàna.
Raha tsy hjisy intsony ny fanadinana, i Through My Eyes dia manontany tena raha mbola hisy tanora ho vaosarika:
Azo itokisana amin'ny maha-tomponandraikitra amin'ny fahalalahany ve ny Maleziana? Tena ireny mpiezaka mafy sy mavitrika ireny ve isika? Nanjary fiarahamonina matimatim-bokatra fotsiny isika. Raha lasa ny kibay sy ny karaoty, be ny hitako fa ho very fanahy mbola velona, indrindra fa ny tanora. Mety amin'ny maro ve ny handia enin-taona amin'ny fanabeazana fototra kanefa tsy manana fanamarinana haderadera avy eo, sa afaka misitraka ny fahalalahan'ny fitrandrahana ao anatin'ny lalao ve ry zareo ? Afaka mahafanatra ny fotoana tsara handraisana andraikitra ve ry zalahy? Sa ry zalahy ho lasa be taraina noho ny sorisorin-tsainy, teny fandreko matetika amin'reo mpianatra fantatro?
Tunku Aisha mankasitraka ny fanafoanana ny fanadinana UPSR sy ny PMR raha hitondra any amin'ny famoronana:
Heveriko fa tena tsara tokoa ny hanafoanana ny UPSR sy ny PMR. Tiantsika ny hananan'ireo mpiantsika saina tia famoronana rehefa mampiasa saina toy izay hisaina fanadinana foana isak'izay mihetsika. Tsy maintsy ovàna ny rafi-panabeazantsika mba hahafahan'ireo taranatsika ho avy mamiratra eny amin'ny tontolo. Afaka mampiditra fomba vaovao ny ministera mba handrefesana ny vokatra azon'ny mpianatra an-dakilasy na amin'ny fampiasana ny streaming.
Kim amin'ny alàlan'ny UndergroundSquare dia milaza fa ny mpianatra rehetra dia tokony hifaninana amin'ny tenanan'izy ireo ihany fa tsy ny namany akory [Avy amin'ny mpandika: toy ilay teny filamatry ny toeram-pampianarana Malagasy iray manao hoe ‘Tsy ny namanao no ifaninananao fa ny tsara vitanao omaly‘] :
Misy sekoly vitsivitsy any Taiwan/HK , izay mampihatra io rafi-panabeazana io ka ny mpianatra rehetra dia tsy mifaninana amin'ny namany akory. Ny tenany ihany no ifaninanany. Araka izany ny fomba ataon-dry zareo dia ny mankasitraka ireo izay nahavita nanatsara ny isa azony miohatra amin'ny isa azon'ny tamin'ny fitsapana farany. Misy tsirony kokoa izay noho ilay hoe mifaninana amin'olon-kafa izay mety manana fitadidiana matanjaka ohatra.
Araka ny filazan'ny New Straits Times, Muhyiddin Yassin dia manome tolo-kevitra mba hanaovana dinika an-databatra boribory iraisan'ireo antanan-tohatra rehetra voakasik'izany alohan'ny handraisana fepetra. Ity mpanoratra ity dia mino fa ilaina ny fakana ny hevitra avy amin'ny lafy maro, nefa tokony haka ny hevitr'ireo tanora ihany koa ny Ministera:
Tena zavatra faran'izay manan-danja tokoa ny fakàna ny hevitr'izy ireo noho izy ireo miaina ilay rafi-pampianarana. Ny fanapahan-kevitra raisina anio dia ho tombontsoan'ny taranana MAleziana ho avy.
Ny sary anjorony nampiasaina tamin'ity tamin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny pejy flickr-ny CLF